Mu'asasada Alminhaaj oo Raashin ka timid Jimciyada Shaariqa Imaaraati ku Wareejisay Qoysas danyar ah Boosaaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Mu’asasada Alminhaaj oo Raashin ka timid Jimciyada Shaariqa Imaaraati ku Wareejisay Qoysas danyar ah Boosaaso[Sawirro]
Mu’asasada Alminhaaj ayaa deeq raashin ah oo ka timid Jimciyada Shaariqa ee dalka Isutaga Imaaraatka ku wareejisay qoysas danyar ah iyo kuwa ka yimid Yemen ee jooga magaaladda Boosaaso.
Deeqda ayaa ka koobnayd Sonkor,Bur,Bariis,Timir iyo Saliid,waxayna qayb ka tahay deeqaha ka imanaya walaalaha EEBE wax siiyay ee Sadaqada la baxaya taasoo wax weyn ka u tareysa qoysaskaas.
Guddoomiye Kuxigeenka Mu’asasada Alminhaaj Ciise Siciid Maxamed ayaa sheegay in deeqdan ka faa’ideysteen qoyaska kasoo qaxay Yemen iyo kuwa deegaanka ee danyarta ah taasoo ka timid Jimciyada Shaariqa ee Imaaraatiga ah.
..”” Waxaan maanta halkan ku bixinay deeq dhan 850 qoy oo ka kooban koobnayd Sonkor,Bur,Bariis,Timir iyo Saliid,deeqdaas oo ay bixisay Jimciyatul Shaariqa ee dalka Isutaga Imaaraatka carabta …”ayuu yiri.
Guddoomiye kuxigeenka gobolka Bari Axmed Xaaji Yuusuf iyo Guddoomiyekuxigeenka Boosaaso Qaasim Cabdirixmaan ayaa sheegay in wax weyn u tareysodeeqdan dadka dhiba isla markaana mahadcelin usoo jeediyey Minhaaj iyoShaariqa.
Qoysaskii ka faa’ideystay deeqdan raashinka ah ayaa dhankooda si weyn uga mahadceliyey ,waxayna sheegeen in loo baahanyahay in xiliyadan oo kale la isu gargaaro lana garab Istaago walaalaha dhiban.